musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Malaysia News » Chii chinotevera kuMalaysia Tourism?
Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Malaysia News • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • Interviews • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kukurukurirana kwepaneru nenyanzvi dzekushanya kubva kuMalaysia kwakapera mwedzi wekutanga zviitiko zve World Tourism Network vhiki ino.
Yakarongwa naRudolf Herrmann, mukuru we WTN Malaysia Chitsauko, hurukuro yepaneru inosanganisirwa
Sook Ling Yap - Asia Yepasirese Services DMC
Badaruddin Mohamed - Tourism yeUSM
Jane Rai - Nhungamiro Yekushanya Nenhaka ine sarudzo dzakatarwa
Malaysia Hotel Sangano
Musi wa23 Zvita, nzira inotarisirwa yekuvhurwa kwekushanya kuMalaysia yakagadzwa nemukurumbira mutungamiriri wehurumende pamwe negurukota rezvekushanya pachena. Kubva munaKurume 2020 kwave paine akasiyana mafambiro ekufamba kwekuraira kana kukiya, pamwe nezvirambidzo zvekushandira mabhizinesi anoenderana nekushanya muMalaysia. Masangano akasiyana siyana nemasangano ane hukama anoita seasina kukwanisa kuwana mhinduro dzinobatika dzekumisikidza migumisiro yeupfumi mukutengeserana kwedu kwakakonzerwa nedenda nemhedzisiro yaro.
Zvichakadaro, pakave nekuferefetwa kuzhinji nezviremera zvakasiyana, kusvika kune zvinotarisirwa mafambiro ekufamba-kwenjodzi kuMalaysia. Zviwanikwa zvakakosha zvaive:
Kufamba kwevhiki kupera kumba kuri kutanga kutanga, kutsemuka kwete kure zvakanyanya kubva kumba. Kubva Kurume / Kubvumbi '21 kuenda pakati nepakati-renji kufamba kwemhepo kusvika maawa mana kunouya.
Vatengi vanotarisa pane:
kuchengetedzeka / utsanana / nyaya dzine chekuita nehutano
Gara neboka repedyo revanhu (shamwari / hama)
Tarisa mahotera ane yakakwira hutsanana zviyero
Sarudza maresitorendi ane hutsanana / chengetedzo
Vatengi vanofarira vekunze nemhepo-kutenderera (Glamping, zvekunze zviitiko)
Chitima / bhazi yekufamba haisati, nepo ndege yacho yakati siyanei.
4/5-nyeredzi mabrandi anoita kuti vatengi vavimbe nekuchengetedzeka uye nyaya dzehutsanana
Nzvimbo dzekugara dzakasarudzika sedzinoshandirwa / dzimba dzinomutsa kunetsekana kwehutano
Nzvimbo dziri kudiwa igungwa, gomo, kumaruwa - zvinopesana nemaguta
Kufamba kweboka hakuna kukumbirwa zvakanyanya, mota dzakavanzika ndidzo sarudzo inosarudzwa.
Vanhu vanoda kubata kwavo kwekushayikwa kwekufamba 2020, ronga kaviri kune 2021 zvirinani.
Hutano kugadzirisa APP kunzvimbo yekuenda kwezvikonzero zvekuchengetedza
Iyo yekuenda @ covid kesi yakachengeteka sei?
Kukwezva kwezvigadzirwa zvitsva nevatapi (kureva kushanda kubva kumahotera)
T / O kutsvaga kana kukudziridza niches / hunyanzvi, kureva Virtual mafambiro negwara renhungamiro?
Kushandisa tekinoroji kunodikanwa (isina kugunzva gwaro kuongorora)
Vamwe vanofanira kutanga, vamwe vachatevera marwendo ehutano / zvinopihwa (iyo yoga, yekunze nezvimwewo…)
Nyaya dzekuchengetedza dzinofanira kugadziriswa [isina chepfu, isina mapurasitiki…]
Kukwidza rutsigiro rwezvigadzirwa zvemuno kuti zviongororwe
Inofanira here kuve tsika itsva kuongororwa Covid-negative usati wakwira ndege?
Nyika dzinogona kutora zvirongwa zvakajairika zvekuvhurazve kufamba nekukurumidza
-kuunganidza kuedza kuita uye kusundira pamwechete
Nhanho inotevera: Yemamiriro ekunze ekukurumidzira kuziviswa neETOA
Uku ndiko kusarudzika kwemaitiro uye mibvunzo inoshandiswa mukati mekosi kana nguva ichibvumidza chete. Ichatemwa ipfupi panguva yekumhanya chikamu, zvinoenderana nehunyanzvi hurukuro uye tsananguro.
Kuti ubatanidze World Tourism Network, shanya www.wtn.travel/register